HALATRA LAKOLOSY TANY ANTSOHIHY : Pretra maty notifirin’ny jiolahy, Frera iray naratra mafy
Lasibatra hatrany ireo relijiozy. Nirefodrefotra indray ny basy tao amin’ny fikambanan-dry Mompera Capucin, tao Ambendrana, Antsohihy, ny alin’ny asabotsy hifoha ny alahady 23 avrily teo iny, tokony amin’ny 1 ora maraina. 24 avril 2017
Jiolahy telo raha kely indrindra no tonga nanafika an-dry Mompera tamin’io fotoana io.
Ny hangalatra lakolosy tao amin’ny fiangonana Md Francois, misy an’ireto Mompera sy Frera ireto no tanjon’izy ireo tamin’izany. Efa hatramin’ny zoma alina lasa teo iny no tonga nanafika ireo jiolahy saingy nanohitra ireo relijiozy ka nitsoaka nandositra ny jiolahy. Ny alin’ity sabotsy hifoha alahady ity anefa dia niverina masiaka ireo mpanafika ka nirongo basy mahery vaika ary tafiditra tao antranon-dry Mompera mihitsy.
Tsikaritr’ireto reliziozy ireto ny fahatongavan’ny jiolahy ka nisy ny fifanjevona. Resy tosika ny jioahy ka teo am-pivoahana hitsoaka iny no nanapoaka basy ireto jiolahy ireto, ka Pretra iray no maty voatifitra tamin’izany, voa teo amin’ny kibony, Frera iray hafa kosa naratra mafy, tsaboina ao amin’ny hôpitalibe Antsohihy ao. Voatifitra teo amin’ny feny ity farany, ka voatery noentina niakatra aty an-drenivohitra mba hotsaboina.
Raha tsiahivina dia efa ny Alakamisy Masina, talohan’ny Paska no efa nikendry io lakolosy io ireo mpangalatra. Tsy nahomby anefa izany ka dia io niverenany tamin’ny zoma io nefa tsy mbola tanteraka ihany ny fikasan-dratsin’izy ireo. Efa mailo anefa ry Mompera ka nanao andrimaso hatrany niambina ilay lakolosy. Voalazan’ny loharanom-baovao anefa fa nampiasa tetika hahazoana io fitaovana io ihany koa ireo jiolahy.
Rehefa tonga teo izy telo lahy, ny sabotsy hifoha alahady io, dia nalainy ilay lakolosy. Henon-dry mompera anefa izy ireo ka mody navelany teo afovoan-tokotany ny lakolosy. Rehefa iny nivoaka iny anefa ilay Pretra hijery ny zava-nisy tao an-tokontany no avy hatrany dia notifirin’izy ireo tsy nananay hantra, ka maty tsy tra-drano. Naheno izany ny Frera iray ka handeha hamonjy saingy notifirin’izy ireo ihany koa ka voa teo amin’ny feny. Noentin’ireo mpanafika mora foana ny lakolosy avy avy eo ary tsy hita popoka ny toerana nandosiran’izy ireo.
Efa mandray ny andraikiny kosa ny mpitandro ny filaminana any an-toerana.